သံပခြုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သံပခြုပ်
Posted by Ko chogyi on Jul 24, 2012 in Creative Writing | 22 comments
အခုတစ်လော ဆလုံလူမျိုးတွေအကြောင်း ဖတ်ရလို့ ကျွန်တော်လည်း စာရေးချင်တာနဲ့ ဆလုံလူမျိုးများနဲ့ တွဲပြီး အမှတ်ရနေမိတဲ့ သံပခြုပ်ကောင်လေးများအကြောင်း ရေးလိုက်မိပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ဘုရားကပေးတဲ့အိမ်လို့ သဘောထားပြီး သစ်ထွင်းလှေငယ်လေးများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုး တန်းတစ်လျှောက် ကျွန်းကြီးကျွန်းငယ်များအကြား နေထိုင်ကျက်စားလျှက်ရှိတဲ့ ဆလုံ(ခေါ်) ပင်လယ်ပျော်မော်ကင်း များနှင့် ခွဲခြားမရနိုင်သော သံပခြုပ်ကောင်လေးများ ဖြစ်ပါသည်။
သံပခြုပ်မှာ ဒေသအခေါ်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ခဗေဒအမည်မှာ Sea Urchin ဖြစ်သည်။ သံပုရာသီးတစ်လုံး၏ ပတ်လည်တွင် ဆူးကလေးများ စီတန်းစိုက်ထားသကဲ့သို့ပုံသဏာန်ရှိပြီး မဲမဲလုံးလုံး အကောင်ငယ်ကလေးများ ဖြစ်သည်။ ဆလုံများ အဓိက ကြိုက်နှစ်သက်သော အစားအစာဖြစ်ပြီး အလွန်တရာခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေများ၊ ခေါင်းဆောင်/ အကြီး အကဲများကိုသာ ရှာဖွေကျွေးမွေး၊ လက်ဆောင်ပေးတတ်ကြသည်။ တော်ရုံသင့်ရုံခင်မင်သူများအား သံပခြုပ်မကျွေး တတ်ပါ။
သံပခြုပ်ကောင်အား ညင်သာစွာခွာယူပြီး ဓားဖြင့်ခွဲကာ အတွင်းရှိအသားများ(ခုံးကောင်၊ ခရုကောင်တို့၏ အသား များကဲ့သို့) ကို ပြုတ်ခြင်း၊ ပေါင်းခြင်း၊ ကြော်ခြင်းများ ပြုလုပ်စားသုံးနိုင်သည်။ အသားမှာ ချိုအီပြီး ညှီသောအရသာရှိ ပါသည်။ သံပခြုပ်ကိုစားလျှင် သွေးအားကောင်းခြင်း၊ ဟော်မုန်းဓာတ်တိုးပွားခြင်းနှင့် ရာသီဥတု ပူခြင်း/အေးခြင်းတို့ ကိုခံနိုင်ရည် ရှိစေပါသည်။
သံပခြုပ်ကောင်၏ ထူးခြားမှုမှာ ၄င်းတို့၏အနီးသို့ အမျိုးသားများ ချည်းကပ်လာပါက ဆူးတောင်များထောင်ပြီး တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ပါက လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ ငြိမ်သက်စွာ နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သံပခြုပ်များကို ဆလုံအမျိုးသမီးများကသာ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းပြုကြသည်။
သံပခြုပ်ကောင်များသည် အများအားဖြင့် ရေအောက်ကြမ်းပြင်ရှိ သဲနှုန်းများနှင့် ဘာဂီကျောက်တန်း၊ ကျောက်ပုံ များကြားတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၄င်းတို့ကိုနင်းမိလျှင် သို့မဟုတ် ၄င်းတို့၏တိုက်ခိုက်ခံရလျှင် ဆူးများက လူအသား တွင် စိုက်ဝင်ကျိုးကျန်ခဲ့ပြီး အနာရင်းကာ ပြည်တည်ပြီး အသားပုတ်တတ်သဖြင့် အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်လယ်စာ ကြိုက်တတ်သူများအနေဖြင့် သံပခြုပ်ကြော်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသော်လည်း သံပခြုပ်ဖမ်းခြင်း ကို လူတိုင်းမလုပ်ဆောင်ရဲကြဘဲ ပင်လယ်ပျော်မော်ကင်းများကသာ ဖမ်းဆီးရှာဖွေနိုင်သူများဖြစ်ပါသည်။
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_urchin ကို မှီငြမ်းပါသည်။
သံပခြုပ်ကောင်က ဘဲဒွေကိုကျဒေါ့ ရန်မူပီး စော်ဒွေကျတော့ ညိမ်နေဒယ်ဒဲ့ အဆန်းဘဲဟ
အင် တစ်ချိန်က ဗိုလ်နေဝင်းငပလီရောက်တိုင်း ဒီအသားနည်းနည်းသတ္တဝါကို
စားချင်ပါတယ်ပူဆာလို့ ရေလုပ်သားတွေ ခက်ရာခက်ဆစ်ရှာပေးခဲ့ရဖူး၏။
ထူးဆန်းပါပေ့ P chogyi ရေ…
မိန်းခေးတွေ မှ ဖမ်းလို့ရသတဲ့… တယ်အသိဥာဏ်ကြီးတဲ့ သတ္တဝါတွေပါလားနော်….
ဟုတ်တယ် .. နှာပခြုပ်လို့ ခေါ်သင့်တယ် ….။
နှာပခြုပ်ကြောင့် နေဝင်းက ငပလီရောက်တိုင်း တကူးတကစားတာပေါ့ ကိုဂျစ်ရ။
ပီချိုကြီး ကောင်းမှုနဲ့ သိလိုက်ရပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ချောင်းသာ ခရီးတုန်းက လာရောင်းသေးတယ် ။
စားကောင်းမှန်း မသိတာနှင့် ငြင်းလိုက်မိတယ် ။
နောက်တစ်ခါဆို စားပစ်မယ် ။
ကျွန်တော်ရေးဖို့ ကျန်သွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာက မြိတ်ကျွန်းစုတွေဖြစ်တဲ့ လင်းလွန်းကျွန်း၊ ဒုံးကျွန်း၊
ပြင်စဘုကျွန်း၊ လန်ပိကျွန်းနဲ့ ဇာဒက်ကြီးကျွန်းစုတွေအနီးမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အစိမ်းသက်သက်စားရမှာ ရွံစရာကြီး ၊ စားရဲပေါင်ဗျာ ။
ဟိုနေ့က ကြည့်ဖြစ်တဲ့ variety show တခုထဲမှာ အားရပါးရ စားနေတာတွေ့လို့ ဘာကောင်ပါလိမ့်လို့ ခုမှပဲ သိတော့တယ်။ အစိမ်းစားပြနေကြတာ။ သေသွားရင်တော့ သူ့ဆူးတောင်တွေက မဆူးတော့ပဲ အသာလေး ကိုင်လို့ ရတာ တွေ့မိတယ် ။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကိုင်ပြတော့ လက်အိတ်တွေ စွပ်ထားကြ တယ် ။ သံချောင်းတော့ မဟုတ်ဖူး ။ ဓားဦးချွန်လို ဟာမျိုးတွေနဲ့ ကိုင်ကြတာ။
To lb 250 !!!!!
ချောင်းသာသွားတုံးက သံပရာသီးညှစ်ပြီး ကြက်ဥသောက်သလို အစိမ်းစား ဖူးတယ်
ယောက်ျား အား အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုပဲ။
သံပခြုပ်ဆိုတာ .. ကြားသာ ကြားဖူးတာ .. အခုလိုတောင် မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး …. ။
ဆလုံလူမျိုးတွေကတော့ ရေငုတ်ချင်း အတတ်မှာ ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ ပြောစမတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ။
အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး ခွဲခြားသိတယ်ဆိုတော့ ………. အတော် ဆန်ဆာကောင်းတဲ့ သတ္တ၀ါတွေပဲလို့ပြောရမယ် … ။ အရသာကတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး ။ ဂုံးတို့ ၊ ယောက်သွားတို့တောင် မစားရဲတာ …. ရောင်းတာတွေ့လျှင်လည်း စားရဲမယ် မထင်ဘူး ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း သတ္တ၀ါလေးပဲ.. လူတောင် ကျားမ သိတယ် ဆိုတော့.. သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ မသိသေးတဲ့ ကျား နဲ့ မ ခွဲခြားနိင်တဲ့ ဓါတ်သဘော ပဲ ပြောရမလား.. လျှပ်စစ် သံလိုက်စွမ်းအားပဲ ပြောရမလား.. အဲလိုတွေ ရှိလို့ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
သံပခြုပ် ဆိုတာ ကြားဖူးတယ် မမြင်ဖူးလို့ အခုမှ မြင်ဖူးတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သများလည်း အပေါ်က သေနတ်သမားဂျီး ပြောသလိုပါပဲချင့်
အိ .. နာမည်ပြောင်းသွားပီလေ …. နှာပခြုပ်ဒဲ့
စာမဖတ်ဘဲ ပုံဘဲအရင်ကြည့်လိုက်တာ လိမ္မော်ခွံထင်နေတာ ခုတော့သိသွားပြီ သံပခြုပ် ကောင်ပါလား။ ခုလိုသိခွင့်မြင်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။